ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကဟိုးအဝေးကြီးကနဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုထဲမှာ Lego အဖွဲ့သည်၎င်း၏ပထမဆုံးလိုင်စင်ရဆောင်ပုဒ်ဖြစ်မည့်အရာအတွက် Lucasfilm နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Lego Star Warsမရ။ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်ကြာပြီးနောက်၎င်းသည်ရုပ်ရှင်၊ တီဗီရှိုးများ၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်အခြားအရာများအားယူဆောင်လာသည့်ကုမ္ပဏီ၏အအောင်မြင်ဆုံးထုတ်ကုန်လိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Lego အုတ်။
The Phantom Menace မှ Skywalker Rise အထိနှင့်အရာအားလုံးအကြား၊ Lego Star Wars X- အတောင်ပံများနှင့် TIE Fighters ကဲ့သို့အထင်ကရယာဉ်များ၏အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေသောတင်ဆက်မှုများမှအစုံရာချီအထိကျယ်ပြန့်သည်။ Star Wars ပရိတ်သတ်တွေ။
မှတဆင့်နှိပ်ပါ LEGO.com လက်ရှိအကွာအဝေးကိုစစ်ဆေးရန် Lego Star Wars The Mandalorian နှင့် The Clone Wars မှမူရင်း trilogy နှင့် prequels များအထိအရာအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားသောຊຸດများ
Lego Star Wars သမိုင်း
1999 ခုနှစ်, Lego Group သည်သမိုင်းကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးလိုင်စင်ရ p ၏စွမ်းအားကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏အနာဂတ်အစုစုကိုအစဉ်အမြဲခိုင်မာစေခဲ့သည်artnerships ။ Winnie the Pooh သည် DUPLO ၏ပထမဆုံးလိုင်စင်ရဆောင်ပုဒ်ဖြစ်လာသည်၊ သို့သော်တကယ့်ခေါင်းစီးဖမ်းသမားဖြစ်သည် Lego Star Warsအဲဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာ New York မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာအရုပ်ပွဲတော်မှာပွဲ ဦး ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုအမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုကိုအတူတကွပေါင်းစည်းခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသိသာဆုံးအရာဖြစ်သည်။ Star Wars အရုပ်များ၊ ကစားစရာများ၊ အရုပ်များနှင့်စုဆောင်းထားသောပစ္စည်းများနှင့်စာအုပ်များထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာလက်စွဲစာအုပ်ကိုပြန်လည်ရေးသားခဲ့ပြီးအရောင်းအ ၀ ယ်အင်အားကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ Lego အဖွဲ့သည်၎င်း၏ရှည်လျားသောအာကာသအပြင်အဆင်နှင့်သိပ္ပံဝတ္ထုကိုမကြုံဖူးပေ။
၎င်း၏အစောဆုံးဖြစ်သည် Star Wars အစုံများသည် The Phantom Menace အတွက်အမှတ်တံဆိပ်ပုံစံအသစ်များရောနှောထားသည် classic A New Hope မှယာဉ်များ၊ ဇာတ်ကောင်များသည် Luke Skywalker, D ၏ပုံငယ်များနှင့်အတူ 7140 X-wing Fighter, 7110 Landspeeder နှင့် 7130 Snowspeeder အပါအ ၀ င် Jedi ၏ Back and Return ကိုပြန်ပေးသည်။arth Vader, Han Solo, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, C-3PO, R2-D2 နှင့်အခြားအရာများ
ထိုဒီဇိုင်းများသည်ယခုခေတ်တွင်ရှေးကျသည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းသည်သာဖြစ်သည် Lego Star Wars အဖွဲ့သည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း၎င်း၏ဒီဇိုင်းများကိုအဆက်မပြတ်မွမ်းမံပြီးသန့်ရှင်းစေခဲ့ပြီး X-wing, Landspeeders နှင့် Snowspeeders တို့၏အသစ်များနှင့်ပိုမိုစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောဗားရှင်းများကိုသယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါ Lego Star Wars ဆောင်ပုဒ်သည်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၏ရှေ့တန်းတွင်ရှိသည် Lego အုပ်စု - ၎င်း၏အစောပိုင်း minifigures များစွာသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်သဘောတူညီချက်များနှင့်ဒီဇိုင်းအခြေခံမူများကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် switch မှလမ်းကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည် classic ၂၀၀၀ ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းများတွင်အသားရောင်အသားရောင်အက္ခရာများမှအဝါရောင်အသားအရေ minifigures များ၊ မီးခိုးရောင်အဖုံးများ၊ ခေါင်းစွပ်များနှင့်လိုင်စင်ရအိမ်တွင်းတည်ဆောက်ပုံများနှင့်ဇာတ်ကောင်များအတွက်ပိုမိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအခြားအကြောင်းအရာများသို့ပါ ၀ င်သည်။
ယခုအခါ၎င်း၏ ဦး ထုပ်များနှင့် Ultimate Collector Series မော်ဒယ်များမှတိုက်ပွဲပုံစံအထုပ်များအထိပြသမှု ၁၈ မျိူး၊ ပြဇာတ်ပုံစံ ၄ ခုနှင့်ပြဇာတ် ၄ ပုဒ်တို့ပါ ၀ င်သည်။ နောက်ကျောနှင့်ကြား၌ရှိသမျှ Lego Star Wars အခင်းအကျင်းကအရှိန်လျှော့တဲ့လက္ခဏာမပြဘူး။
Lego Star Wars အစုံ
Lego Star Wars the မှ eclectic experiments အချို့ကိုလက်ခံခဲ့သည် Lego ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ လမ်းပြမြေပုံ BIONICLE-esque လုပ်ဆောင်ချက်ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ချည်နှောင်ပါ။ ယနေ့ခေတ်ထုတ်ကုန်အစုစုသည်အနည်းငယ်ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့သော်လည်းကွဲပြားခြားနားသောပရိသတ်ကိုပစ်မှတ်ထားသောအစုံမျိုးစုံပါ ၀ င်သည်။
ဥပမာ, Lego Group ၏မကြာသေးမီကလူကြီးဈေးကွက်သို့တွန်းအားပေးမှုကကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည် Lego Star Wars Helmet Collection - အစုံအပါအဝင် 75277 Boba Fett သံခမောက်လုံး (ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့် 75304: Dartဇ Vader သံခမောက်လုံး (ပြန်လည်သုံးသပ်)-နှင့်အသစ်တည်ထောင်ထားသောပြသမှုမော်ဒယ်များ၊ ၇၅၂၉၄ Bespin Duel နှင့် 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း (ပြန်လည်သုံးသပ်) အမှ ကောလဟာလသတင်းများအရ ၇၅၃၃၀ Yoda ၏သင်တန်း
Ultimate Collector Series များသည်လည်းခေါင်းစီးများအပါအ ၀ င်အားကောင်းဆဲဖြစ်သည် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon (ပြန်လည်သုံးသပ်), 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer နှင့် အသစ် - ထုတ်ဖော် 75313 ကို AT-AT (ပြန်လည်သုံးသပ်) ပြီးတော့ မင်းရဲ့ဘဏ်အကောင့်က အဲဒီ titans တွေဆီ မဆန့်ဘူးဆိုရင်တောင်၊ ၇၅၃၀၈ R75308-D2 (ပြန်လည်သုံးသပ်), 75275 A- တောင်ပံ Starfighter (ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship (ပြန်လည်သုံးသပ်) ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဘတ်ဂျက်အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
အဲဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး Lego အဖွဲ့၏ရိုးရာလူ ဦး ရေစာရင်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်နောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ 75300 မှာ Imperial လည်စည်းတိုက်လေယာဉ် (ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့် 75301 Luke Skywalker ၏ X-wing တိုက်လေယာဉ် (ပြန်လည်သုံးသပ်၊ classic ထိုအချိန်မှစ၍ ပူးပေါင်းလာကြသောသင်္ဘောများ 75302 မှာ Imperial လွန်း (ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship (ပြန်လည်သုံးသပ်) ့။ ဤလျှော့ချထားသောပုံစံများသည်၎င်းတို့၏ရှေ့ထွက်များကဲ့သို့တိကျမှုမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်လူငယ်များအတွက် ၀ ယ်ယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
မူလအကြောင်းအရာသုံးခုလုံးတွင်မူရင်း trilogy ကိုအလေးအနက်အာရုံစိုက်နေတုန်းဘဲ၊ ယနေ့များစွာကဲ့သို့အမြဲရှိနေလိမ့်မည်၊ Lego Star Wars The Mandalorian အပါအ ၀ င်အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းမျိုးစုံမှအစုံသည်အစရှိသောထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြစ်သည် 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့် 75315 Imperial အလင်း Cruiser (ပြန်လည်သုံးသပ်) - နှင့် The Clone Wars တို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည် Mandalore အပေါ် 75310 Duel (ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့် ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter (ပြန်လည်သုံးသပ်).
Lego Star Wars သေးသေးလေး
၎င်း၏အစောဆုံးနေ့ရက်များမှစ Lego Star Wars theme သည် minifigures များဖြင့်ဖြစ်နိုင်သောအရာများ၏နယ်နိမိတ်ကိုတွန်းပို့ခဲ့ပြီး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောထုတ်ကုန်လိုင်းနှစ်ခုလုံး၌အနာဂတ်ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းများ၏ ဦး တည်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်မှာ Chewbacca သည်၎င်းအတွက်တကယ့်နည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုကိုတင်ပြခဲ့သူဖြစ်သည် Lego ၉၀ ခုနှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်အုပ်စုလိုက် နောက်ဆုံးတွင်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် Chewie ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ရှေ့နှင့်နောက်ဘက်ကိုဖုံးအုပ်ထားသောပုံစံခွက်တစ်ခုနှင့်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ Ewoks, Gamorrean Guards နှင့် SpongeBob SquarePants တို့၌ထိုတူညီသောနည်းလမ်းကိုအသုံးချခဲ့သည်။
Jar Jar Binks သည်ထူးခြားသော ဦး ခေါင်းပန်းပုကိုလက်ခံရရှိရန်ပထမဆုံးသော minifigures များထဲမှတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Yoda နှင့် Boba Fett တို့သည်တိုတောင်းသောခြေထောက်များနှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးအသုတ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်နေတာမှမဟုတ်တာ Lego Star Wars ဇာတ်ကောင်များသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း minifigure ဒီဇိုင်းတီထွင်မှုအတွက်လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။
အလယ်တန်းဈေးအရ အုတ်ခဲငါတို့ ၁၂၀၀ ကျော်ရှိတယ် Lego Star Wars ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစ၍ minifigures များသည်၎င်းတို့အားလုံးကိုစုဆောင်းရန်အတော်လေးခက်ခဲပြီးစျေးကြီးသည်။ အစုံများကဲ့သို့၎င်းတို့မှအရာအားလုံးကိုဆွဲယူသည် အဆိုပါ Skywalker SagaThe Rogue One နှင့် Solo to The Clone Wars, Rebels and The Mandalorian, Legends နှင့်အတူပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအကြောင်းအရာများဖြစ်သော The Force Unleashed, The Old Republic, Galaxy's Edge and The Freemaker Adventures ။
တန်ဖိုးအကြီးဆုံးအချို့ Lego Star Wars ယနေ့ minifigures များသည် Yoda သည်သူ၏ NY I He တွင်ရှိသည်art ကိုယ်ထည်၎င်းသည် Times Square ရှိ Toys R Us တွင်သီးသန့်ရရှိနိုင်သောအရောင်းမြှင့်တင်ရေးပုံသေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုအခါအကြမ်းအားဖြင့်ပေါင် ၇၀၀၀ ဖြင့်ရနိုင်သည်။ ပြီးနောက် Yuletide Squadron လေယာဉ်မှူး၎င်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၌သာပါဝင်သည် Lego ၀ န်ထမ်းလက်ဆောင် ၄၀၀၂၀၁၉ ခရစ်စမတ် X-wing နှင့်ယခုပျမ်းမျှယူရို ၃၀၀ အောက်သာရောင်းချသည်။
Lego Star Wars Skywalker စစ်ကိုင်း
E2019 တွင် ၂၀၁၉ တွင်ပထမဆုံးကြေငြာခဲ့သည်။ Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း ဆုတ်ယုတ်မှုပြီးနောက်ဆုတ်ယုတ်မှုကိုခံစားခဲ့ရသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာနှောင့်နှေးပြီးနောက်နှောင့်နှေးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ မူလက ၂၀၂၀ တွင်ဖြန့်ချိရန်မျှော်မှန်းထားသည့် The Phantom Menace မှသည် The Rise of Skywalker အထိအရာအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားသော saga-spanning game သည် ပထမဆုံးနောက်ကျသည် ၂၀၂၁ နွေ ဦး သို့ ထို့နောက် ၂၀၂၂ နွေ ဦးGamescom ပွဲစဉ်များဆက်တိုက်။
အမှန်မှာ၊ ၂၀၂၂ နွေ ဦး သည်၎င်းအတွက်အခြေခံအားဖြင့်အတိအကျဖြစ်သည် Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း လောလောဆယ်မှာဂိမ်းဖြန့်ချိမယ့်အချိန်အတိအကျကိုငါတို့စောင့်ဆိုင်းနေတုန်းဘဲ၊ ငါတို့ဒီပွဲကိုငါတို့လက်ထဲရောက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုအတိအကျစောင့်ဆိုင်းနေတုန်းဘဲ။ ဟိ နောက်ဆုံးပေါ်နောက်တွဲယာဉ် TT Games အပါအဝင်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်အတွင်းကပြုလုပ်ခဲ့သောတိုးတက်မှုများကိုပြသခဲ့သည် ပိုမိုတောက်ပသောဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်း.
ရည်မှန်းချက်ကြီးခေါင်းစဉ်ကိုအက္ခရာရာပေါင်းများစွာထည့်သွင်းရန်သတ်မှတ်ထားပြီးအများစုကိုကစားနိုင်သည် ဂြိုဟ် ၂၀ နီးပါး ap နှင့်အတူပြီးမြောက်ရန်မစ်ရှင်များစွာကိုစူးစမ်းရန်artယခင်ကဖုံးကွယ်မထားသောပုံပြင်စည်းချက်များကိုအာရုံစိုက်သည် Lego Star Wars ဗီဒီယိုဂိမ်းများ။
Lego Star Wars အဆိုပါ Mandalorian
The Mandalorian ၏ပထမဆုံးရာသီရောက်လာသည် Disney+ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် Jedi အခင်းအကျင်းမှပြန်လာပြီးနောက် Din Djarin ၏စွန့်စားမှုများကိုပြောခဲ့သည်။ Baby Yoda (သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင် Grogu၊ Cara Dune နှင့် Greef Karga အပါအ ၀ င်) နှင့် Boba Fett, Ahsoka Tano နှင့် Luke Skywalker ကဲ့သို့ပရိတ်သတ်အကြိုက်များကိုဖန်သားပြင်များနှင့်တွေ့ခဲ့သည်။
အတော်လေးနှေးကွေးသော start အမှ Lego Star Wars The Mandalorian ၏ theme လွှမ်းခြုံမှုသည်ပထမရာသီ၌ပွဲ ဦး ထွက်တစ်ခုတည်းနှင့်သာပြသခဲ့သည် 75254 ကို AT-ST Raider ကို (ပြန်လည်သုံးသပ်), စဉ်တွင် 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (ယခင် သင်တုန်းမောက်) နောက်ထပ်တစ်နှစ်အတွက်စင်ပေါ်ကိုရောက်မလာခဲ့ဘူး Lego ယခုအုပ်စုသည်ပထမဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွင်အပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်ထားသည် Star Wars တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လသည်ကျွန်ုပ်တို့အားထပ်တိုးအသစ်လှိုင်းလုံးကိုယူဆောင်လာခဲ့သည် Lego Star Wars Mandalorian line-up အပါအ ၀ င် 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder (ပြန်လည်သုံးသပ်), 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship (ပြန်လည်သုံးသပ်), 75315 Imperial အလင်း Cruiser (ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့် ၇၅၃၁၉ The Armorer's Mandalorian Forge (ပြန်လည်သုံးသပ်) ့။ အဲဒီ့ကတည်းကသူတို့ကပူးပေါင်းလာတယ် 75307 Star Wars ထွန်းပြက္ခဒိန်Din Djarin နှင့် Baby Yoda ၏ပွဲလမ်းသဘင်များပါဝင်သည်။
ယခုအချိန်တွင်သာ နောက်ထပ် Mandalorian တစ်အုပ် ၇၅၃၂၁ တွင် Razor Crest Microfighter သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက်ကောလဟာလသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည် အနည်းဆုံးနှစ်စုံ ပြပွဲ၏ spin-off စီးရီး The Book of Boba Fett ကို အခြေခံ၍ လည်းလမ်းပေါ်တွင်ရှိသည်။
X-wings, Snowspeeders နှင့် TIE Fighters များသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းအဆက်မပြတ်တည်းဖြတ်မှုများရရှိရန်တစ်ခုတည်းသောအစုံမဟုတ်ပါ။ Lego Star Wars အစုံ၊ ခြေလေးချောင်းပါသော Imperial AT-AT walker သည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့်အကြေးခွံများကြား၌လက်တစ်ဖက်တည်းတွင်သင်ရေတွက်နိုင်သည်ထက်အုတ်များဖြင့်ပြန်လည်ဖန်တီးထားသည်။
စကေး၏သေးငယ်သည့်အဆုံး၌ ၄၄၈၉ AT-AT နှင့် ၇၅၀၇၅ AT-AT Microfighter ၇၅၀၇၅ တို့ကဘဏ်ကိုမချိုးဖျက်ဘဲ AT-ATs တပ်ကိုစုဆောင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ 75288 ကို AT-AT (ပြန်လည်သုံးသပ်) ၏အထွတ်အထိပ်ကိုကိုယ်စားပြုသည် Lego Star Wars ဒီတုတ်ကောက်အတွက် ဒီဇိုင်း – အနည်းဆုံး အချိန်အထိ 75313 ကို AT-AT မြင်သာထင်သာမြင်သာအောင် သစ်ခွဲထားပြီး၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော Walker ၏ ပထမဆုံး Ultimate Collector Series ဗားရှင်းအဖြစ် ယခင်စက်ရုပ်သားရဲများအားလုံးကို သေးငယ်သွားစေသည်။
ကနေရရှိနိုင် Black ကသောကြာနေ့ (သို့မဟုတ် နိုဝင်ဘာ ၂၆) အတွက် £26 / $749.99 / €799.99၊ 75313 ကို AT-AT ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည် Lego Star Wars ရက်စွဲသတ်မှတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှိ လမ်းလျှောက်သူအကြောင်း ပိုမိုရှာဖွေပါ။ အသေးစိတ်သုံးသပ်မှုဒါမှမဟုတ် ပြန်ကန်သွင်းပြီး ငါတို့ကို စောင့်ကြည့်ပါ။ ဗီဒီယိုကိုပြန်လည်သုံးသပ်.
10178 Motorized Walking AT-AT အကြောင်းကိုလည်း မေ့ထားလို့မရပါဘူး၊ ဒါက အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Lego အဖွဲ့၏ရိုင်းပြသောစမ်းသပ်မှုများ Lego Star Wars နှစ်ပေါင်းများစွာ line-up ထိုပုံစံကိုကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းကျကျပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပါ ဒီမှာ.
Lego Star Wars ထောင်စုနှစ် Falcon
အကြီးဆုံးဖြစ်နေတုန်းပဲ။ Lego Star Wars အပိုင်းအရေအတွက်အားဖြင့်ရက်စွဲသတ်မှတ်ရန် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိသောအခါမှတ်တမ်းအမျိုးမျိုးကိုရိုက်ချိုးခဲ့သည်။ Ultimate Collector Series set သည် Han Solo ၏ကုန်တင်သင်္ဘော၏အကြီးမားဆုံး၊ စျေးအကြီးဆုံးနှင့်စျေးအကြီးဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်။ Lego bricks 7,541 / 649.99 799.99 / $ 799.99 / € XNUMX အတွက်အုတ်ခဲ ၇၅၄၁ တုံး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကတခုတည်းမဟုတ်တာသေချာတယ်။
အလွန်ပထမဦးဆုံး Lego Millennium Falcon သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်တောက်လျှောက်စတင်ခဲ့ပြီးယနေ့စံနှုန်းများအရအလွန်ရှေးကျသည်။ ၎င်းအတွက်ကြာရှည်မခံပါ Lego အဖွဲ့၏ကြီးမားသော qu ကိုစွန့်လွှတ်ရန်အုပ်စုarter-dishes သည်အပိုင်း ၄ ပိုင်းခွဲထားသော ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ၄၅၀၄ Millennium Falcon တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သောခေတ်သစ် play-scale Falcons များအတွက်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။
အဲဒီအချိန်ကစပြီးကျနော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီ Lego အုပ်စုသည် Falcon ကို microscale၊ mini ပုံစံ၊ Microfighter အဖြစ်၊ midi-scale၊ ပြဇာတ်တစ်ခုအနေနှင့် A New Hope နှင့် The Empire Strike Back မှတောက်လျှောက် The Force Awakens နှင့် The Rise of Skywalker သို့အမှန်အတိုင်းတင်ပြသည်။ ၁၀၁၇၉ Millennium Falcon နှင့် minifigure scale နှစ်ခုလုံးတွင်ရှိသည် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon.
နည်းသော Lego Star Wars မော်တော်ယာဉ်များသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများစွာရှိသည် Lego Millennium Falcon အဖြစ် အုပ်စုဖွဲ့၍ အနည်းဆုံး ၀ ယ်ယူရန်အနည်းဆုံးယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းကိုသင်စောင်၌အနည်းဆုံးတွေ့ရလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏မူရင်းဖြန့်ချိမှုမှလေးနှစ်ကြာလျှင် UCS ဗားရှင်းသည်စင်ပေါ်မှပျံဝဲနေဆဲဖြစ်သည်။
Lego Star Wars Black ကသောကြာနေ့
ယခုနှစ်ဝယ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန် Lego Star Wars အစုံသည်မကြာခဏဖြတ်ကျော်နေသည် Lego VIP တနင်္ဂနွေ, Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ထိုကာလအတွင်း၊ Lego အုပ်စုနှင့်တတိယ-party လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်လက်ဆောင်များကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့် VIP အမှတ်နှစ်ဆကဲ့သို့ထုတ်ကုန်များအပေါ်ရက်ရောလျှော့စျေးများ၊ ပရိုမိုးရှင်းများနှင့်မက်လုံးများပေးသည်။
2020 ခုနှစ်တွင်ဥပမာ, ၇၅၂၄၄ Tantive IV မှာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချခဲ့သည် LEGO.com150 150 / $ 150 / € 40410 နှင့်ထို့ထက်ပိုသော XNUMX Charles Dickens Tribute အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။ အငြိမ်းစားယူရာတွင်အလားတူလျှော့စျေးများကိုကြည့်ပါ Lego Star Wars ဖြတ်ပြီး သတ်မှတ်သည်။ Black ကသောကြာနေ့ ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ၂၀၂၁ ခုနှစ် Lego Group ၏ စျေးဝယ်ပွဲသည် ထိုနေ့မှစတင်၍ လည်ပတ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်၊ Lego VIP တနင်္ဂနွေ is ပြီးသားအတည်ပြုခဲ့သည် နိုဝင်ဘာ ၂၀ မှ ၂၁ ထိ
ဒီနှစ်အတွက်နောက်ထပ်ဘာကိုမျှော်လင့်ထားလဲဆိုတာကိုထပ်ဆင့်ကြည့်ပါ Lego Star Wars Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ, Lego VIP တနင်္ဂနွေ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့.